Madaxweynaha Masar oo sheegay in dowladdiisu ka qeyb qaadaneyso dagaalka Al-shabaab | Entertainment and News Site
Home » News » Madaxweynaha Masar oo sheegay in dowladdiisu ka qeyb qaadaneyso dagaalka Al-shabaab
Madaxweynaha Masar oo sheegay in dowladdiisu ka qeyb qaadaneyso dagaalka Al-shabaab
daajis.com:- Madaxwaynaha dalka Masar Abdel-Fattah Al-Sisi ayaa Arbacadii ku dhawaaqay adkeynta waddankiisa ku aadan midnimada iyo madax banaanida Soomaaliya, kadib markii uu qadka telefoonka kula hadlay Madaxweynaha Soomaaliya.
Afhayeenka Al-Sisi ayaa yimid intii lagu jiray wicitaan uu la yeeshay dhiggiisa Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), sida ay ku warantay Wakaaladda wararka ee MENA.
Madaxweyne (Farmaajo) ayaa dhankiisa Al-Sisi ku ammaanay doorka Masaarida ee taagerada waddankiisa iyo taageerada ay u fidiso xasilloonida, wuxuuna sheegay inuu ka rajeynayo hormar intaas ka buuran.
Waxa uu sii faah faahiyay xiisaha uu u qabo sii wadida wadashaqeyn heer sare ah iyo wadatashiyo lala yeesho Masar oo la xiriira arrimaha kala duwan ee danta guud oo ay ka mid tahay la dagaalanka Argagixisada.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminyo ayaa gaba gabadii bishii August ee sanadkan waxa ay booqasho ku tageen dalka Masar, halkaasi oo ay ku soo qaateen booqasho qaadatay maalmo kooban, wuxuuna la soo kulmay Madaxweynaha Masar oo uu kala soo hadlay arrimo badan.